travis - Synonyms of travis | Antonyms of travis | Definition of travis | Example of travis | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for travis
Top 30 analogous words or synonyms for travis
ဖီးလ် နိုက်တ် 3. In 2002, နိုက်တ်purchased Will Vinton (Animation) Studios, where his son, Travis, worked as an animator, and changed the name to LAIKA.
Post britpop Coldplay, Starsailor နှင့် Elbow ကဲ့သို့ တီးဝိုင်းသည် ထောင်စုနှစ်သစ်တွင် ဝေဖန်ခြင်းခံရသည်။ garage rock နှင့် post punk revival တီးဝိုင်းများဖြစ်သော The Hives, The Vines, The Stide နှင့် The White Stripes တွင် ခုန်တက်လာခဲ့ပြီး Saviours of rock and rollဟု ဖော်ပြခြင်းခံရသည်။ Travis, Stereophonesနှင့် Coldplay တို့သည် ရှေ့သို့ဆက်ခဲပြီး ထောင်စုနှစ်သစ်တွင် စီးပွားရေးအရ အောင်မြင်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်။ Razorlight, Kaiser Chiefs, Arctic Monkeyနှင့် Bloc Party တီးဝိုင်းတို့ပါဝင်ပြီး Britpop ၏ ဒုတိယမြောက်လှိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုတီးဝိုင်းများ Britpop လွှမ်းမိုးနေချိန် ၁၉၇၀ punkနှင့် post-punk များသို့ ရှေ့ဆက်ခဲ့သည်။
Britpop လှုပ်ရှားမှုနှေးကွေးလာသကဲ့သို့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများ ပြိုကွဲခဲ့သည်။ pop အုပ်စု Spice Girls သည် ၏ ကျော်ကြားမှုသည် Britpop အတွက် တာဝန်ရှိလာခဲ့သည်။ ရုန်းကန်နေစဉ်တွင် Radiohead နှင့် The Vere တီးဝိုင်းတို့အာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် Radiohead သည် အစောပိုင်း Britpop ဖျော်ဖြေမှုများကို လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ၁၉၉၇တွင် Radiohead နှင့် The Verve သူတို့၏ OK Computer နှင့် Urban Hymns ကို ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် ချီးကျူးခံခဲ့ရသည်။ post-Britpop တီးဝိုင်းများဖြစ်သည့် Travis, Stereophonicနှင့် Coldplay တို့သည် Britpop လွှမ်းမိုးမှု
မိုးဘတ် (အမေရိကန်ဘေ့စ်ဘောကစားသမား) ၂၆ ဇွန် ၁၉၂၃ တွင်၊ ယေးလ်သည် ပရင့်စတန်ကို ၅-၁ ဖြင့် ယန်းကီးကွင်းတွင် ရှုံးကာ သုံးကြီးဆု (Big Three title)ကို လက်လွှတ်ခဲ့ရသည်။ ထိုပွဲတွင် ဘတ်သည် ရှော့စတော့တွင် ပြောင်မြောက်သော ကစားမှုကို ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်း၊ ဆင်ဂယ် တခု၊ နှစ်ယောက်တွဲ တခုဖြင့် ရိုက်နေစဉ် ၄ ချက်တွင် ၂ ချက် (2-4) ထိနိုင်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ထူးခြားသော နေ့တနေ့ ဖြစ်ခဲ့သည်။ နယူးယောက် လူသန်ကြီးများ (New York Giants)နှင့် ဘရွတ်ကလင် ရိုဘင် (Brooklyn Robins) အသင်းတို့က ဤ ဂျူးသွေးပါသူကို သူတို့ အသင်းတွင် ပါစေလိုရာ၊ နယူးယောက်ရှိ ဂျူးအဖွဲ့အစည်းသို့ ဆန္ဒပြုလွှာ ပေးပြီး၊ ဘတ်ကို စိတ်ဝင်စားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ လူသန်ကြီးများ အသင်းက သူ့ကို အထူးစိတ်ဝင်စားသော်လည်း၊ သူတို့တွင် ရှော့စတော့၌ ကစားမည့် အနာဂတ် ကြယ်ပွင့်လောင်း (Hall of Famers)ဒေ့ဗ် ဗျူးတီး ဘန်းကရော့ဖ် (Dave "Beauty" Bancroft)နှင့် ထရာဗစ် ဂျက်ဆင် (Travis Jackson) နှစ်ဦး ရှိပြီးသား ဖြစ်သည်။ ရိုဘင်မှာ သာမည အသင်း ဖြစ်ပြီး၊ ကစားခွင့်ရရန် အလားအလာ ပိုကောင်းသည်။ ၂၇ ဇွန် ၁၉၂၃ တွင်၊ ဘတ်သည် ရိုဘင်နှင့် ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ‌တန် သူ၏ ပထမဆုံးသော လိဂ် အသင်းစာချုပ်တွင် လက်မှတ် ထိုးလိုက်သည်။